Yonke intokazi ifuna ukubonakala ikhulu kunaliphi na ubudala. Kule nto, akumele silondoloze umzimba kuphela, kodwa kunye nobuso. Ingqumbo ebanzi yobuso imilebe, ukuze imilomo ihlale iqaqambile kwaye imnandi kufuneka uyikhathalele ngokucophelela. Kusemlonyeni kunokwenzeka ukuchaza isimo sangaphakathi somntu, ukuba i-labiums ebomvu, umntu uphilile ngokupheleleyo, kwaye ukuba kukho umthunzi we-cyanotic, uthetha iingxaki ngezifo zentliziyo. Awukwazi ukuvumela ukuphuma kwegazi emlonyeni, ngaphandle koko kunokukhokelela kumdlavuza womlomo.
Izindebe aziququzeleli izilonda, ngenxa yoko zilahlekelwa ngumswakama ngokukhawuleza kwaye ziqala ukuphazamiseka. Ngokuqhelekileyo kubakho kwiqanda, kwixesha elibandayo lexesha, ngamnye wethu angayibona indlela umlomo omile ngayo. Izindebe ziyakwazi ukulahlekelwa ngumbala wazo wokuqala kunye nokubonakala kwazo, nangenxa yokuntuleka kwamavithamini. Ngomlomo uqala ukwakha imibimbi yokuqala. Esinye sezifo ezingathandekiyo zomlomo yi-herpes, ezinokutshatyalaliswa zivela kwintsebenziswano, kwaye kungenxa yokungcola.
Umbuzo uvela: indlela yokunyamekela kakuhle imilomo? Ukunyamekelwa komlomo, kukho imigaqo emininzi. Okokuqala kufuneka ufunde indlela yokuhlambulula kakuhle imilomo yakho. Ukwenza oku, imihla ngemihla kufuneka uhlambulule umlomo wakho ngokuhlwa kunye ne-cotton swab edibeneyo ngobisi lwezonyango, ngoko umlomo kunye nentsipho zisuswa emlonyeni. Kwakhona, ukucoca umlomo wakho imihla ngemihla, emva kokuba usuqhekeze amazinyo ebusuku, gcoba umlomo wakho kwangaphambili ngokusebenzisa i-lip cream okanye i-petrolatum kubo. Emva kokuxilisa, sebenzisa i-lip cream ekhethekileyo emlonyeni. Kanye ngeveki, kufuneka uhlambulule umlomo wakho, okhethekileyo ukhenkethi wepil, ungayifeza le nkqubo kunye nokuhlambulula ubuso bonke.
Ulawulo olulandelayo luyongxuma kwaye lunondla umlomo. Ukuze silondoloze umswakama womlomo, kufuneka siqale ukuzondla ngaphakathi ngaphakathi, ukusela amanzi kwisamba esaneleyo somzimba. Ukuphucula nokunyusa imilomo isoloko isetyenziselwa ukucoceka ngomlomo, ingakumbi kwixesha elibandayo. Icandelo le-cosmetology lihlakulela iintlobo ezahlukeneyo zeminyango emilonyeni, kubandakanya iibhola. Zinceda imilomo yakho ibuyele, okanye ihlale ijonge. Uphilisa iintlobo ezahlukeneyo emlonyeni, usebenze njengama-moisturizers. Kukho iipiram eziphambili ezisetyenziswe ebusuku, ukuze zondle kwaye ziphuculise umlomo ubusuku bonke. Ngaphambi kokuba ukhethe i-cosmetics ye-lip yolungileyo, kufuneka ucele iingcali ukuba zenze ntoni kwi-makeup.
Ukuba ukubunjwa kubandakanya iivithamini A, E, F kunye neqela B - ziqhekeza iintsikelelo, isikhumba semilomo siyaba lula, siphilise amanxeba, kwaye ke oku kuyimfuneko oyilungisayo ukuze ulondoloze kwaye ulondoloze umlomo ngendlela efanelekileyo. Ukwenza umthamo wemilomo, iiprotheni kwizonyamelo zakha. Amafutha amaninzi kunye ne-bex - zinezixhobo zokunyusa nokunyusa. Ukutya okunomsoco kunye nokunyusa, ukulungiswa komxholo we-chamomile, calendula kunye nejusi ye-aloe kulungile. Izihlunu ze-solar in the composition - zikhusela ulusu lomlomo kwimisebe ye-ultraviolet.
Iimpawu zokuhlobisa azikona mpe mbelelo emlonyeni, nangona kukho iminwe yomlomo ebuye ibe nempembelelo yokwelapha emlonyeni. Iimilo emilonyeni enjalo iyanceda kakhulu ukusetyenziswa kwimizuzu ebandayo kunye neentsuku ezitshisayo, ziya kukhusela imilomo kwifuthe elibi lwendalo. Ngokulumkisa kakhulu, umntu kufuneka aphathe izinto ezibizwa ngokuba yi-lipsticks eziqhubekayo, zingasetyenziselwa kuphela kwiimeko ezigqithiseleyo, kuba zomile imilomo yazo. Emva kokusebenzisa loo miyalelo yomlomo. Qinisekisa ukuba uhlambe umlomo ekhaya kunye nobisi olukhethekileyo ukuze ususe umquba uze ufake isicelo somlomo emlonyeni.
Ukunciphisa umlomo, ungasebenzisa nayiphi na ioli, umzekelo, imifuno okanye umnquma, xa ibandakanywa emlonyeni, unokufaka isicelo somlomo. Ukuze ube nempembelelo enkulu, ungenza kwakhona imaski yomlomo, usebenzisa izilwanyana ezahlukeneyo.
Ngenxa yobuhle bomzimba, siya kwidlovini, sinobuchule, okanye senza nje i-gym ekhaya. Ngoko imilomo idinga ukuzivocavoca. Ukuze bakwazi ukubukeka behle kwaye bafaneleke, kufuneka wenze imisebenzi embalwa elula imihla ngemihla.
Okokuqala, phula umlomo wakho, ugibe kwi-tube, njengokungathi ufuna ukuvuthela ikhandlela, kwaye uqale ukuvuthela, phinda le zihlandlo ezili-15;
ngenxa yalo mzekelo kufuneka udibanise amazinyo akho kwaye uqale ukuphefumula emoyeni, uya kufumana i-grin, kufuneka wenze lo msebenzi kunye namaxesha angama-15;
oku kulandelwa ngokuphindaphindiweyo kwakhona ngamaxesha angama-15 kulo myalelo olandelayo, kuqala sifihla umlomo wethu, ngoko sithatha indawo yokuqala;
Ukugqiba kokugqibela kuyona elula, kuphinda kwakhona ngamaxesha angama-15, ivakalisa izandi zomsindo.
Ukuphulaphulwa kuzo zonke iingcebiso ezingentla, kwaye uzisebenzise ngokusebenzayo, uya kuphila uphelele kakhulu, nceda uzenzele kunye nabo bajikeleze ngomlomo omhle. Kwaye wonk 'ubani makacinge ukuba wenza iifoto zomlomo ebomini bakho bonke, kwaye kuphela uyazi enye. Ziziphi izithandwa zakho nemilomo ethandekayo.
Masks ebusweni: khetha okufanelekileyo
Amagama amahle kunye anqabileyo ngamantombazana azalwa ngo-2016: njani ukubiza umntwana wakho?
Izindlela zokonyango nokukhusela i-striae elukhumbeni
I-horoscope ye-Taurus yo-2010
Eyona ndlela ihle kakhulu yehlobo lwe-summer beauty: Met Gala 2017
Usulelo lweentlobo: njani ukuphepha?